Abanikazi abaningi bamadolobhana amaholidi baphupha insimu, benakekela okudinga umzamo omncane kanye nesikhathi. Namuhla, kunezitshalo eziningi ezihlukene zesikhathi eside ezidayiswayo, futhi kunzima ukuqondisa kulokhu okuhlanganiswa okukhulu hhayi nje kokuqala, kodwa futhi nesitimu esivuthiwe. Ngakho-ke, ungakhetha kanjani izimbali ezingenakuzithoba engadini, kodwa ngesikhathi esifanayo ezikhanyayo, ezinhle nezokuqala?
Ukukhetha izitshalo ezingapheli ofuna "ukuzinza" kusayithi lakho, ukwakha enhlabathini kuwo, zingaki izindawo ezisebusuku nezomthunzi. Akudingekile ukubeka izitshalo ezithandwayo zelanga ezindaweni ezinomthunzi futhi ezimanzi, ezimweni ezinjalo, mhlawumbe, ziyosinda, kodwa ukubonakala kwazo, futhi ngisho nokunye okunezimbali, akunakwenzeka ukukujabulisa. Isibonelo esilula yizimbali ezingenakuhlonipha kakhulu engadini: i-varietal yarrow, i-stahis woolly, eyaziwa kakhulu ngabalimi ngokuthi "izindlebe zezimvu", ezihlukahlukeneyo zomhlonyane, isibonelo uSteller, Schmidt noma eLouisana. Lezi zithandwa zelanga zibekezelela ngisho nezikhathi eziningi kakhulu zesomiso. Lezi zikhathi zokuphila ezifanele zisetshenziselwa izindawo ezivulekile zelanga kanye nomhlabathi onesihlabathi. Lezi zitshalo zizozizwa zikhulu futhi zingabhubhi, ngisho noma uvakashela ingadi kuphela ngezimpelasonto futhi ungawasebenzisa kanye kuphela ngesonto.
Uma unikeza izimbali ngezimo ezijwayelekile kubo, khona-ke ukubanakekela kuzoba kakhulu.
Insimu enhle nganoma yisiphi isikhathi sonyaka
Yonke insimu ephuphayo kusukela ekuqaleni kwentwasahlobo kuze kube sekupheleni kwekwindla isayithi lakhe lalihluma futhi likhangayo. Ukuze uqaphele leli phupho empilweni, ukukhetha izimbali ezingenakuzithoba engadini, kubalulekile ukuzikhethela ngendlela engafanele, futhi hhayi ngesikhathi esifanayo ziqhakaze futhi zifinyelele ekuphakameni kobuhle bazo. Ngaphezu kwalokho, kuyinto efiselekayo ukuthi zifihle lezi zinto noma ezinye izinto ezibonakala zingathandeki kakhulu noma ukungalungi komunye nomunye.
Ama-tulips e-Greig, Foster, Kaufmann nezinye izitshalo ezincane ezifana neHoododoxes, i-Muscari, i-Crocuses ayidingi isidumbu saminyaka yonke futhi asijabulise ngezimbali zabo, kanti abanye bavuka nje. Kodwa ngasekupheleni kwentwasahlobo bayafa, futhi amahlamvu awo abuna futhi aphenduka ophuzi. Akubukeka kuhle kakhulu, kodwa akunakwenzeka ukuba unqume ingxenye engezansi yezitshalo. Konke lokhu kuzokusiza ukufihla imifula - izimbali ezingenakuzithoba zensimu, izithombe zazo ezinikezwa ngezansi, kanye nezitshalo ezinjengokuthi izitsha, izibhamu, amapayipi kanye nama-dummers. Ekupheleni kwentwasahlobo, bonke bahlakulela ngenkuthalo futhi bagubungele amahlamvu aphelile amahlamvu angaphansi kwamahlamvu awo.
Ake sihlolisise ukuthi yikuphi kweminyaka eminingi yezitshalo ezingenakuzithoba ezizokwazi ukuhlobisa izindawo ezithuthukile zensimu.
Hlanganisa ikhoneni elimnyama
Ngokuvamile kunoma iyiphi insimu kukhona izindawo, kunqatshelwe ukunakekelwa kwensimu. Isizathu salokhu - shading njalo kanye nenani elincane ilanga imisebe kuso. Ngaphezu kwalokho, uma bezama ukutshala isitshalo "esihloniphekile," safa, noma sibuhlungu futhi singaboni kahle. Kodwa-ke, izingqimba ezinjengezikhuni zingakwazi ukuhlobisa izimbali ezingenakuzithoba zensimu, zikhetha ukukhula emthunzini. Izidalwa ze-shade zisetshenziswa kakhulu izitshalo ze-herbaceous ezinamahlamvu amahle namanzi, ekhetha inhlabathi enomanzi. Ekwindla, izingxenye zazo ezingenhla zifa, futhi umhlaba usebenza ngokuphumelelayo, futhi kuvela amaqabunga entwasahlobo.
Ekuqaleni kwentwasahlobo, lapho imithi ingahlanganiswa namahlamvu futhi ilanga lishaya izindawo ezinjalo, ziyojabulisa ngezimbali zazo:
I-Siberia ne-European Kandyks.
Lezi zimbali ziyimihla yonke. Ukuze ingadi ingathobeki futhi ingakhathazeki, ngoba ingahlwanyela kokubili futhi ngokuhlukana. Zonke lezi zitshalo zikhula masinyane izidleke zezilimo eziyizigaxa kanye anyanisi, futhi ngaphandle kwalokho zisakaze kahle. Amahlamvu abo afa ngaphandle kokungaqondakali futhi masinyane, ngakho akudingeki ukuba aguqulwe.
Izimbali eziphakathi kwentwasahlobo
Ngemuva kwezimbali zokuqala, izicubu ze-botanical kanye nama-violets, ama-brunners nama-peonies asendle, ama-badan kanye ne-irises warty, ama-lilies ezihlobisa umbala wesigodi ziyaqhakaza - konke lokhu kuyizimbali ezingenakuzithoba. Ukuze insimu enezihlahla ezindala, lapho kunezinkamba eziningi ezisebusweni, ziyoba umhlobiso omuhle. Zonke lezi zitshalo zihlala isikhathi eside, ngaphandle kokuthi ziphindwe kahle ngokuzimela. I-peony yasendle, ngokungafani nezihlobo zayo zamasiko, ikhetha ukukhula futhi ikhule kahle emthunzini noma e-penumbra. Mayelana nama-brunners, awaziwa ngabalimi abaningi ababizwa ngokuthi "nezabudochniki, kufanele kushiwo ngokwehlukana. Izimbali ezincane eziluhlaza okwesibhakabhaka-oluhlaza okwesibhakabhaka zalesi sitshalo zifana nokukhohlwa-mina-nots futhi ziyaqhakaza entwasahlobo. Kodwa lapha amahlamvu ezinhlobonhlobo eziningi akwazi ukuhlobisa insimu kuze kube seqhwa. Namuhla lezi zimbali ezingenakuzithoba zensimu zimelelwa izinhlobo ezihlukahlukene, kufaka phakathi izinhlobo ezihlukahlukene.
Ihlobo elijabulisayo nekwindla
Ehlobo kuze kufike phakathi kwekwindla, izitshalo ezinjalo ezihlala ebusika-ezinzima njengezimpande ze-phloxes, ama-host, ama-astilba, ama-tsimitsifugi (ama-klopogons), ama-ferns ezinhlobonhlobo kanye ne-pachisandra zibukeka kahle kakhulu ezindaweni ezinomthunzi.
I-Shilovid phloxes ayizizwa kabi emthunzini futhi ikhula kuqala kulezi zinhlobo. Izimbali ezimnandi zethenda eluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu nezibomvu zifana nama-moths namasonto ambalwa sicela ujabule.
Sekuyisikhathi eside amahostela ethanda abalimi, kodwa eqoqa izitshalo zokutshala emthunzini, kungcono ukuyeka izinhlobo ngezinhlamvu ezikhanyayo noma eziluhlaza okwesibhakabhaka. I-Astilby - izimbali ezinhle kakhulu-ezikhula iminyaka engadini. Izitshalo ezingenakuzithoba ezinamahlamvu avulekayo, uma zikhethiwe kahle, zingajabulisa izimbali zazo zonke ihlobo. Ngaphezu kwalokho, abakhiqizi benza izinhlobo ezihlukahlukene nge-inflorescences ezinhlobonhlobo zembala namajamo.
Kodwa i-tsimitsifuga, eyaziwa kangcono ngaphansi kwegama elithi "klopogon", kulo lonke ihlobo izohlobisa insimu ngemidwebo yayo, efana ne-astilbum amahlamvu, futhi ekwindla izojabulela izimbali zayo.
Ukuhlobisa ngokuphumelelayo izindawo ezinomthunzi ezihlukahlukene ze-buzulniki - ligulyarii. Izinhlobo zalesi sitshalo ziningi, zikhona eziluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu, ngisho namaqabunga anemibala eluhlaza okwesibhakabhaka, njengokwesibonelo, ezihlukahlukene ze-Osiris Café Noir. Emasimini ethu, i- Przewalski buzzon ijwayele kakhulu, ngokusatshalaliswa kakhulu amaqabunga aluhlaza kanye nobude, ama-peduncles aphuzi enelanga akhula emitha.
Iningi lalabo ababalwe ngenhla elikhunjulwa ngenhla likhula kahle e-penumbra. Ukuhlobisa indawo encane kakhulu futhi izimbali ezinjalo azizithobeki ensimini, njenge-aquilegia, i-dorenikum ne-dicenter. Futhi uma i-dorenikum izokujabulisa wena ngezimbali eziphuzi njenge-chamomile, khona-ke amacembe e-aquilegia namuhla afika kuyo yonke imibala nemithunzi. Izimbali ezikhungweni zingase zihluke - pink, cherry, white noma bicolour, futhi ngemuva kokuqhakaza amaqabunga awo amakhulu okuhlobisa ubheka okuhle.
Ihlobisa izakhiwo emthunzini omnyama futhi ikhava enjalo yomhlabathi iphela njengomlumbi. Ihluma ngokuthobekile - izimbali ezincane, ezinjenge-bells, kodwa iyinhlobonhlobo yonke ukubonga kwesizini emaqabunga ayo. Ngezinhlobonhlobo ezahlukene zingaba yi-silvery ngokuphelele, enomngcele omncane ohlaza okwesibhakabhaka noma ohlanganiswe nezinhlayiya ze-silvery zobukhulu obuhlukahlukene.
Ukuze ugcwalise izikhala ezingenalutho, isembozo senhlabathi enjalo njenge-creeper ne-periwinkle inhle. Kubalulekile ukukhumbula, ukutshala izitshalo ezinjalo ukuthi zihlukumeza futhi, uma kungenjalo ukukhawulela ukukhula kwazo, isibonelo, ngokutshala ebhodweni elibumba ngaphandle kwezansi, bazozama ukubamba yonke indawo eseduze.
On meadow enelanga ...
Uma isayithi likhanya futhi lingekho emthunzini, khona-ke izikhathi ezinjenge-echinacea, i-heliopsis, izinhlobo zokuhlobisa ze-yarrow kanye nabahlanza, ama-astrub asters, ama- daylilies, umhlonyane, kanye nezinhlanzi ze- ornamental ziyokhula futhi zikhule kahle . Zonke lezi zikhathi zokuphela ziyakwazi ukumelana nesomiso futhi azidingi ukuchelela njalo futhi okuvamile.
Sazama ukukutshela ukuthi yiziphi izimbali ezingenakuzithoba kakhulu engadini, kodwa kuphela ongakhetha futhi ukhule izitshalo ezifanele kakhulu wena nesiqephu sakho!
Bright Ranunculus. Ukutshala nokunakekelwa
Indawo yokugcina izithombo zaseShayina: incazelo nokubuyekeza
Demi jacket: ukuthi imfashini?
MTS yamanani. Unlimited Inthanethi 4G. Izimali i-angenamkhawulo internet MTS
Indlela iphathwa inyumoniya e abadala